Ny tetika tsara indrindra hanararaotana ny Xiaomi Mi A1 | Androidsis
Eder Ferreno | | Android cheat, Tutorials, Xiaomi
Xiaomi dia lasa iray amin'ireo marika manandanja indrindra eo amin'ny tsena. Na eo aza ny zava-misy fa vao nivarotra tamin'ny fomba ofisialy tany Azia izy ireo dia napetraka ho iray amin'ireo lafo indrindra eran-tany. Ankehitriny rehefa manomboka mivarotra amin'ny tsena vaovao izy ireo dia hitombo hatrany ny varotra. ny fanombohana fitaovana toy ny Xiaomi Mi A1 Manampy koa.
Telefaona tena lehibe ho an'ny orinasa izy io. Satria momba ny voalohany manana Android One. Ka mandao ny MIUI ny telefaona ary misafidy Android madio. Fotoana kely mety ho fanalahidy ho an'ny orinasa. Ka, Izahay dia mamela anao amin'ny tetika tsara indrindra amin'ity Xiaomi Mi A1 ity.
Un telefaona misy pototra be toa izao dia mendrika hararaotina tanteraka. Izany no antony itondranay andiam-pitadiavana teti-dratsy mba hitrandrahana tsara amin'ity Xiaomi Mi A1 ity. Vonona ny hihaona amin'izy ireo?
1 Ampiasao ho toy ny fanaraha-maso lavitra ny findainao
2 Ampiasao ireo fihetsika
3 Mihidy apps miaraka amin'ny sensor sensor
4 Ampiasao ny radio FM
5 Hanova ny hakitroka
6 Fetsy fanampiny
Ampiasao ho toy ny fanaraha-maso lavitra ny findainao
Izy io dia fiasa tena mahaliana izay ilaintsika fampiharana ho azy. afaka avadiho ho fitaovana fanaraha-maso lavitra manerantany ny fitaovana Azontsika ampiasaina amin'ny fitaovana hafa. Manomboka amin'ny fanovana fantsona amin'ny fahitalavitra ka hatramin'ny fampiakarana ny haavon'ny fitaovana hafa. Mety hahasoa be tokoa izany.
Ampy amin'ny misintona fampiharana iray antsoina hoe Mi Remote. Misaotra an'io, ny sensor infrared an'ny Xiaomi Mi A1 dia araraotina ary noho izany dia avadintsika ho a fanaraha-maso lavitra amin'ny fomba tena tsotra.
Mi Remote Controller - ho an'ny TV, STB, AC ary maro hafa
Ampiasao ireo fihetsika
Podemos ampiasao amin'ny alàlan'ny zavatra maro ny sensor an'ny dian-tànanan'ity Xiaomi Mi A1 ity. Ho an'ny maro hafa mihoatra ny eritreretintsika. Satria tsy isalasalana fa fomba fampiasana fihetsika. Azontsika atao ny mampiseho ny bara fampandrenesana. Alefaso fotsiny ny rantsan-tanananao dia ho afaka avy eo. Raha te hampandeha ity safidy ity dia mila miditra amin'ny fananganana ary safidio ny safidio fikosehana ho an'ny fampandrenesana. Amin'izany no ahafahanao mankafy azy io.
Mihidy apps miaraka amin'ny sensor sensor
El Azo ampiasaina amin'ny zavatra maro ny sensor amin'ny tanan-tanan'ny finday araka ny efa nolazainay taminao. Ny iray amin'ireo ilaina indrindra dia ny manidy na mamoha fampiharana. Mba hanaovana izany dia mila mametraka rindranasa tsotra fotsiny isika ahafahantsika manao izany amin'ny fomba tena tsotra. Betsaka ny rindranasa azo atao hanakanana fampiharana. Fa, raha ny tiantsika dia ny mampiasa ny sensor sensor ho an'ny hidin-trano fampiharana, iray amin'ireo safidy tsara apetraka amin'ny Xiaomi Mi A1 -ntsika dia AppLock.
Developer: LabM DoMobile
Ampiasao ny radio FM
Este Xiaomi Mi A1 dia tsy manana radio FM, na dia tsy olana aza izany, satria misy fomba ahafahana mihaino ny radio FM nefa tsy mila mamaka na mampiasa angona finday. A andiana dingana tena tsotra fa ahoana ny antsika avelao hankafy ny radio ianao:
Manokatra ny fangatahana telefaona izahay
Ampidiro ny kaody * # * # 6484 # * # *
Mivoaka ny menio ary mihodina hatramin'ny farany isika
Safidintsika ny safidy FMRadio
Mampifandray ny headphones izahay
Misafidy ny fahita matetika tiantsika hohenoina
Efa afaka mihaino radio isika
Ny olana lehibe amin'ity safidy ity dia izany raha mivoaka ny efijery isika dia ho tapaka ny playback. Fa raha tsy izany dia efa afaka mankafy ny Radio FM amin'ny Xiaomi Mi A1 anay amin'ny fomba somary tsotra.
Hanova ny hakitroka
Ny fanovantsika ny hakitroky dia midika fa ny ny habetsaky ny atiny aseho eo amin'ny fiovan'ny lamba. Afaka mahita atiny bebe kokoa na latsak'izany izahay avy eo miankina amin'ny fanapahan-kevitra horaisinay. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy ataontsika mandehana any amin'ny sehatr'asa ary avy eo mankany amin'ny efijery. Any, manana ny fahafaha-manao izany isika mitombo na mihena ny hakitroky.
Amin'ny fampihenana ny hakitroka dia misy atiny misimisy kokoa hita eo amin'ny efijery. Raha mampitombo azy ny ataontsika dia hiseho ho lehibe kokoa ny zava-drehetra ary hahazo aina kokoa ny famakiana azy. Miankina amin'ny safidinao ny misafidy safidy iray na hafa.
Ianaro ny fomba fametrahana Tema Xiaomi amin'ny findainao finday avo lenta hamboarinao tanteraka.
Izany dia ny fisafidiananay ny tetika hahazoana tombony betsaka amin'ny Xiaomi Mi A1. Manantena izahay fa mahasoa ho anao ireo fikafika ireo. Inona ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny tetika tsara indrindra ho an'ny Xiaomi Mi A1
Ary hahafahanao manamboatra zavatra ho an'ny pikantsary izay tsy ny bokotra miampy ny bokotra ???
Tsara ny tolakandro, vao nividy Xioami Mi A1 aho, ary faly aho. saingy manana olana aho dia tena osa ny hovitrovitra, misy fomba hampiakarana ny hamafin'ny hovitrovitra. fampiharana sasany izay mampihatra azy.
Misaotra sy tratry ny andro.
yop dia hoy izy:
Manana ny A1 aho ary mamoha azy amin'ny dian-tànana ary koa ny pin, na izany aza amin'ny fidirana mivantana amin'ny fakantsary dia afaka mamoha izy raha tsy mila ny dian-tànana na pin.
Mamaly an'i Yop
Ny fampiharana tsara indrindra hanovana feo amin'ny Android